Amazon က Kindle သည်တရုတ် ဈေးကွက် မှ နုတ်ထွက် သည်ဟူသော ကောလာဟလ များကို တုံ့ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Amazon က Kindle သည်တရုတ် ဈေးကွက် မှ နုတ်ထွက် သည်ဟူသော ကောလာဟလ များကို တုံ့ပြန် ခဲ့သည်
Jan 04, 2022, 16:30ညနေ 2022/01/07 00:04:03 Pandaily
စျေးကွက် ကောလာဟလ များကို တုံ့ပြန် သည့်အနေဖြင့် Kindle သည် ပိတ် ထားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း မရှိတော့ ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မှထွက်ခွာ ရန်ပြင်ဆင် နေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။Amazon ရဲ့ ပြည်တွင်း ကိုယ်စားလှယ် က အင်္ဂါ နေ့မှာ တုံ့ပြန်: “ကျနော်တို့ တရုတ် စားသုံးသူ အစေခံ ရန် ကျူးလွန် နေကြသည်။ စားသုံးသူ တတိယ ပါတီ အွန်လိုင်း နှင့် အော့ ဖ် လိုင်း လက်လီ အရောင်းဆိုင် များ မှတဆင့် Kindle devices များ ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။” အဆိုပါ ကြေညာချက် ကိုလည်း Kindle e-book စာဖတ် သူ အချို့ မော်ဒယ် များ တရုတ် စျေးကွက် အတွက် ရောင်း ထွက် ခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
အေစာပိုင္းက အင္တာနက္ သံုးစဲြ သူ အခ်ိဳ႕က e-commerce ပလက္ ေဖာင္း တြင္ ရွာေဖြ ခဲ့ရာ Amazon Kindle Tmall ၏ တရား၀င္ အထင္ကရ စတိုး ဆိုင္ ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ ပိုင္းတြင္ ပိတ္သိမ္း ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ JD.com ၏ ကိုယ်ပိုင် အထင်ကရ စတိုးဆိုင် တွင် အနိမ့်ဆုံး မော်ဒယ် မှလွဲ၍ Kindle ထုတ်ကုန် များသည် ကုန်ပစ္စည်း မရှိ တော့ပါ။
ထို့အပြင် Amazon China မှ လွတ်လပ်သော သတင်းရင်းမြစ် များက BKEconomy သို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲ အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ လက ဖျက်သိမ်း ခံခဲ့ရ ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲ များ ၏အစီရင်ခံစာ များသည် Kindle ၏ တရုတ် နိုင်ငံမှ ဆုတ်ခွာ ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင် ချက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Amazon China မှ တုန့်ပြန် မှုအရ Amazon မှပေးသော အရည်အသွေးမြင့် ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် အာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ပြောင်းလဲ လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
Kindle နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ် မှုသည် Amazon China ၏ ဒေသတွင်း e-commerce လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်း ပြီး ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် Amazon မှထွက်ခွာ သွားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ် ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Gartner: Alizon Cloud IaaS အခြေခံအဆောက်အအုံ စွမ်းရည်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ် တစ် ဖြစ်ပြီး Amazon နှင့် Google ထက်သာလွန်သည်။
CHNCI မှ ကောက်ယူ ရရှိသော အချက်အလက်များအရ Kindle တည် ရှိသည့် ပြည်တွင်း e-reader စျေးကွက် သည် တစ်ဖက် တွင် သေးငယ် ပြီး အခြားတစ်ဖက် တွင် နှေးကွေး နေသည်။ ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇ အထိ စျေးကွက် အရွယ်အစား သည်ယွမ် ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၇၀. ၄ သန်း) ၊ ၃. ၂ ဘီလီယံ ယွမ် ၊ ၃. ၄ ဘီလီယံ ယွမ် နှင့် ၃. ၇ ဘီလီယံ ယွမ် အသီးသီး ရှိပြီး နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ တိုးတက် မှုနှုန်းမှာ ၇% ခန့်ရှိသည်။
Amazon သည္ တ႐ုတ္အမွတ္တံဆိပ္ ၆၀၀ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀၀၀ ခန္႔၏ အေကာင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ယင္းအေကာင့္မ်ားကို မေလ်ာ္ကန္စြာ အသံုးျပဳထားေသာ Platform တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ ဒီပိတ္ပင္မႈဟာ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ ထုတ္ျပန္ရတာပါ။